ဘောလုံးလောကရဲ့မွို့ခံဒါဘီပှဲတှထေဲမှာ အထငျရှားဆုံးဒါဘီပှဲတဈပှဲဖွဈတဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနဲ့မနျစီးတီးတို့ရဲ့
မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲက မနကျဖွနျ(စနနေေ့)ည မွနျမာစံတျောခြိနျ(၇:၀၀)နာရီကရြငျ အိုးလျထရကျဖို့ဒျကှငျးကွီးမှာယှဉျပွိုငျကစားမှာဖွဈပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျလကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒျပိုငျးယိမျးယိုငျနပွေီး (၁၀)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ ရမှတျ(၂၀)နဲ့ ထိပျဆုံးကခယျြလျဆီးနဲ့(၅)မှတျအကှာ၊ အဆငျ့(၃)နရောမှာရပျတညျနပေါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးကတော့ မနျစီးတီးအသငျးထကျ အခွအေနပေိုဆိုးနပွေီး နှရောသီတုနျးက စီရျောနယျလျဒို၊ ဗာရနျး၊ ဆနျခြိုတို့ကိုချေါယူခဲ့ပမေယျ့
ရလဒျပိုငျးနဲ့ခွစှေမျးက စိတျပကျြစရာအနအေထားဖွဈနသေလို ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအစပိုငျးမှာပဲ (၃)ပှဲအထိရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့အပွငျ
(၁၇)မှတျသာရရှိထားတဲ့အတှကျ ခနျြပီယံဆုမြှျောလငျ့ခကျြက စောစောစီးစီးအဆုံးသတျရမယျ့အနအေထားဖွဈနပေါပွီ။
ဒါပမေဲ့ အံ့အားသငျ့ဖို့ကောငျးတာက ယူနိုကျတကျနညျးပွဆိုးလျရှားဟာ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲဆိုရငျ ဂှါဒီယိုလာကို ‘အခဉျြ’လိုဖွဈနပွေီး နောကျဆုံး(၄)ပှဲမှာ (၃)ပှဲနိုငျ၊ (၁)ပှဲသရနေဲ့ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ပါဘူး။
မနှဈကလညျး မနျစီးတီးအသငျးရှုံးပှဲမရှိစံခြိနျတှနေဲ့ ရလဒျကောငျးနခြေိနျမှာတောငျ ဆိုးလျရှားက အီတီဟတျမှာ (၂-၀)ဂိုးနဲ့အနိုငျယူပွခဲ့ပါသေးတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ဒီနှဈမှာ ဘယျလိုရလဒျမြိုးထှကျပျေါလာမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ . . .
ဒီနှဈသငျးရဲ့ခွစှေမျးပိုငျးကို သုံးသပျရမယျဆိုရငျတော့ နှဈသငျးစလုံးမှာ အားနညျးခကျြကိုယျစီရှိနပွေီး ယူနိုကျတကျအသငျးက ပိုဆိုးနတေယျလို့တောငျသတျမှတျရမယျ။
မနျစီးတီးအသငျးဟာ နှရောသီကာလတုနျးက ဟယျရီကိနျးကို မရလိုကျတာက တကယျနဈနာခဲ့သလို Lone Striker အဖွဈပီပီပွငျပွငျကစားနိုငျမယျ့သူမရှိတာက ပွဿနာဖွဈနတေယျ။
ဂရီးလဈရျှကို ဗွိတိနျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျသနျး(၁၀၀)နဲ့ချေါယူခဲ့တာက မှားတယျလို့မပွောနိုငျပမေယျ့ အသငျးတိုကျစဈပုစ်ဆာအတှကျ အဖွမှေနျတော့မဟုတျခဲ့ဘူး။
ဒီရာသီမှာ မနျစီးတီးတိုကျစဈကစားဟနျက ထကျမွကျနဆေဲဆိုပမေယျ့ အခှငျ့အရေးတှကေို ဂိုးအဖွဈပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ တိုကျစဈမှူးမရှိတာက ကွီးမားတဲ့ထိုးနှကျခကျြလိုဖွဈနပွေီ။
အခု မနျစီးတီးကစားပုံက ဘယျလိုဖွဈနလေဲဆိုရငျ Build Up Play တှကေောငျးတယျ၊ တှဲလုံးတှေ၊ Off The Ball Movement တှကေောငျးပမေယျ့
ပွိုငျဘကျအသငျးရဲ့ Final Third Zone ထဲရောကျရငျ အခှငျ့အရေးတှကေို ဂိုးအဖွဈပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ Poacher မရှိတဲ့အတှကျ
တခြို့ဂိုးရနိုငျတဲ့အခှငျ့အရေးတှကေ အခညျြးနှီးဖွဈခဲ့ရပွီး ဂိုးရဖို့အဆငျ့ဆငျ့တညျဆောကျလာသမြှက သဲထဲရသှေနျဖွဈသှားလရှေိ့တာပါပဲ။
အဲဒါက ပွီးခဲ့တဲ့ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲမှာ ထငျထငျရှားရှားကို မွငျတှရေ့မှာပါ။
နောကျတဈခုကတော့ ကှငျးလယျဗိုလျခြုပျဒီဘရိုငျးနား အခုနောကျပိုငျးပှဲတှမှော စှမျးဆောငျရညျကသြလိုဖွဈနတောကလညျး မနျစီးတီးအတှကျပွဿနာဖွဈနတေယျ။
ဘာနာဒိုဆေးလျဗားက ကှငျးလယျမှာတိုးအားရုနျးအားကောငျးပမေယျ့ မနျစီးတီးကှငျးလယျမှာ Intelligent Passing တှလေုပျနိုငျတာက ဒီဘရိုငျးနားတဈယောကျလောကျပဲရှိပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ Crossing ၊ ကှနျပွူတာနဲ့တှကျခကျြထားသလို တိကသြခြောတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတှကေနေ မနျစီးတီးအသငျးဂိုးရခဲ့တာက အကွိမျပေါငျးမရတှေကျနိုငျတော့ပါဘူး။
အခု ဒီဘရိုငျးနား ပုံမှနျခွစှေမျးအောကျရောကျနခြေိနျမှာ ကှငျးလယျက လုပျအားနှုနျးကောငျးနဆေဲဖွဈပမေယျ့ ပဲ့ထိနျးမရှိဘဲ
မောငျးနရေတဲ့ သင်ျဘောတဈစငျးလိုဖွဈနပွေီး ကှငျးလယျက ပုံမှနျအတိုငျးလှုပျနပေမေယျ့ Impact ဖွဈတဲ့စှမျးဆောငျရညျမြိုးမရှိတော့သလိုဖွဈနတေယျ။
ဒီရာသီမှာ ပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျရအောငျ၊ ဒေါသထှကျအောငျ ရသမြိုးစုံပေးနတေဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးနညျးပွဆိုးလျရှားအတှကျ အခုပှဲက သူ့အနာဂတျကို အဖွထေုတျပေးမယျ့ပှဲတှထေဲက တဈပှဲလို့သတျမှတျရမှာပါပဲ။
ဆိုးလျရှားရဲ့ အားနညျးခကျြက ဘာလဲဆိုတာ ပရိသတျတှလေညျးသိနပွေီဖွဈလို့ အထှအေထူး မဝဖေနျတော့ပါဘူး။
အရငျက (၄-၂-၃-၁)ကစားကှကျကို ဘာမှ Strategy မပါဘဲ ဒီအတိုငျး ခငျးကငျြးပွီး ကစားနတောကနေ အခုနောကျပိုငျး (၃-၅-၂)၊ (၃-၄-၃)တှေ ပွောငျးကစားပမေယျ့လညျး
ဆိုးလျရှားရဲ့ နညျးဗြူဟာအားနညျးခကျြကွောငျ့ ယူနိုကျတကျကစားဟနျက တညျငွိမျမှုမရှိတဲ့အပွငျ ပိုဆိုးတာက တိုကျစဈကစားသမားတှပေါ နရောပြောကျကုနျတော့တာပါပဲ။
စပါးနဲ့ပှဲမှာ (၃-၅-၂)ကို ပထမဆုံးအသုံးပွုပွီး (၃-၀)ဂိုးပွတျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ စပါးအသငျးရဲ့စိတျဓာတျပိုငျး၊ ခွစှေမျးပိုငျးက ယူနိုကျတကျထကျ ပိုဆိုးနတောမမေ့ထားသငျ့ပါဘူး။
အခု ကှနျတီကိုငျနတေဲ့အခြိနျမြိုးမှာသာ တှရေ့မယျဆိုရငျ ဆိုးလျရှားရဲ့ယူနိုကျတကျနညျးပွဘဝက အဲဒီပှဲအပွီးမှာပဲ အဆုံးသတျသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။
အခု မနျစီးတီးနဲ့ပှဲမှာသာ (၃-၅-၂)နဲ့ဆကျကစားရငျ မနျစီးတီးဘကျက ပွိုငျဘကျဧရိယာထဲက Space တှကေို ဘယျလိုအသုံးခရြမလဲဆိုတာကောငျးကောငျးသိတဲ့ ဂရီးလဈရျှ၊ ဖိုဒနျ၊ ဘာနာဒိုဆေးလျဗား၊ ဂြေးဆုတို့အတှကျ အကွိုကျဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲတုနျးက မနျစီးတီးကစားသမားတှကေို ကိုယျ့ကှငျးဘကျခွမျးမှာ လုံးဝ Space မပေးဘဲ Tight Defensive Play နဲ့ကစားခဲ့တာကို သတိပွုသငျ့ပါတယျ။
အခု ယူနိုကျတကျရဲ့ Double Pivot ဖွဈတဲ့ ဖရကျဒျ၊ တှမျမီနေးတို့ ရုနျးကနျနရေခြိနျ၊ ပေ့ါဘာက စိတျပကျြစရာအကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျရညျပွသနခြေိနျမှာ
ယူနိုကျတကျကှငျးလယျက ခံစဈကို Cover လုပျပေးဖို့မလှယျသလို၊ တိုကျစဈကို ပံ့ပိုးနိုငျစှမျးက အရငျကတညျးကမကောငျးတာကွောငျ့ ဘာမှမြှျောလငျ့လို့မရနိုငျပါဘူး။
(၃-၅-၂)ကစားပုံအရ စီရျောနယျလျဒိုဟာ သူနဲ့တှဲဖကျကစားရမယျ့သူ(စပါးနဲ့ပှဲမှာ ကာဗာနီ)ရှိလာလို့ အရငျလိုတဈယောကျတညျးရုနျးကနျနရေတာမြိုးမရှိတော့ဘဲ၊
ပွိုငျဘကျခံစဈကလညျး သူ့တဈယောကျတညျးကို အာရုံစိုကျလို့မရတော့တဲ့အတှကျ (၁၈)ကိုကျဧရိယာအတှငျး ပိုလှုပျရှားလို့ရလာတယျဆိုတဲ့ ကောငျးကြိုးတဈခုပဲရှိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မွငျတာကတော့ ဗာရနျးလညျး ဒဏျရာရနတောကွောငျ့ ဆိုးလျရှား အရငျအတိုငျး(၄-၂-၃-၁)ပဲပွနျကစားဖို့မြားပါတယျ။
တဈခုရှိတာက ခံစဈမှာ အတ်တလနျတာနဲ့ပှဲတုနျးကခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ ဘာယီကို ပွနျသုံးသငျ့တယျလို့မွငျမိတယျ။
ပရိသတျတှအေတှကျ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာတှပေေးစှမျးမယျ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲကတော့ မနကျဖွနျကရြငျ ကွညျ့ရှုခံစားရတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဂှါဒီယိုလာကို ပရီးမီးယားလိဂျမှာ မကွာခဏထိပျပုတျနတေဲ့ ဆိုးလျရှားတဈယောကျ ဒီပှဲမှာဘယျလိုတှပွေငျဆငျလာမလဲ …
ဂှါဒီယိုလာကရော ယူနိုကျတကျအသငျးကို ဘယျလိုနညျးဗြူဟာတှနေဲ့ရငျဆိုငျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတော့တယျ . . .
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ မန်စီးတီးတို့ရဲ့ဒါဘီပွဲကို နည်းဗျူဟာပိုင်းအရ ချဉ်းကပ်ကြည့်ရအောင် . .
ဘောလုံးလောကရဲ့မြို့ခံဒါဘီပွဲတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးဒါဘီပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့မန်စီးတီးတို့ရဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲက မနက်ဖြန်(စနေနေ့)ည မြန်မာစံတော်ချိန်(၇:၀၀)နာရီကျရင် အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကွင်းကြီးမှာယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒ်ပိုင်းယိမ်းယိုင်နေပြီး (၁၀)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ရမှတ်(၂၀)နဲ့ ထိပ်ဆုံးကချယ်လ်ဆီးနဲ့(၅)မှတ်အကွာ၊ အဆင့်(၃)နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ မန်စီးတီးအသင်းထက် အခြေအနေပိုဆိုးနေပြီး နွေရာသီတုန်းက စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ဗာရန်း၊ ဆန်ချိုတို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် ရလဒ်ပိုင်းနဲ့ခြေစွမ်းက စိတ်ပျက်စရာအနေအထားဖြစ်နေသလို ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအစပိုင်းမှာပဲ (၃)ပွဲအထိရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အပြင် (၁၇)မှတ်သာရရှိထားတဲ့အတွက် ချန်ပီယံဆုမျှော်လင့်ချက်က စောစောစီးစီးအဆုံးသတ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတာက ယူနိုက်တက်နည်းပြဆိုးလ်ရှားဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲဆိုရင် ဂွါဒီယိုလာကို ‘အချဉ်’လိုဖြစ်နေပြီး နောက်ဆုံး(၄)ပွဲမှာ (၃)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲသရေနဲ့ ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ မနှစ်ကလည်း မန်စီးတီးအသင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တွေနဲ့ ရလဒ်ကောင်းနေချိန်မှာတောင် ဆိုးလ်ရှားက အီတီဟတ်မှာ (၂-၀)ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီနှစ်မှာ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ . . .
ဒီနှစ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကို သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်သင်းစလုံးမှာ အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိနေပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းက ပိုဆိုးနေတယ်လို့တောင်သတ်မှတ်ရမယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ နွေရာသီကာလတုန်းက ဟယ်ရီကိန်းကို မရလိုက်တာက တကယ်နစ်နာခဲ့သလို Lone Striker အဖြစ်ပီပီပြင်ပြင်ကစားနိုင်မယ့်သူမရှိတာက ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။
ဂရီးလစ်ရ်ှကို ဗြိတိန်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း(၁၀၀)နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာက မှားတယ်လို့မပြောနိုင်ပေမယ့် အသင်းတိုက်စစ်ပုစ္ဆာအတွက် အဖြေမှန်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီရာသီမှာ မန်စီးတီးတိုက်စစ်ကစားဟန်က ထက်မြက်နေဆဲဆိုပေမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးမရှိတာက ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်လိုဖြစ်နေပြီ။
အခု မန်စီးတီးကစားပုံက ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင် Build Up Play တွေကောင်းတယ်၊ တွဲလုံးတွေ၊ Off The Ball Movement တွေကောင်းပေမယ့် ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ Final Third Zone ထဲရောက်ရင် အခွင့်အရေးတွေကို ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Poacher မရှိတဲ့အတွက် တချို့ဂိုးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေက အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဂိုးရဖို့အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်လာသမျှက သဲထဲရေသွန်ဖြစ်သွားလေ့ရှိတာပါပဲ။
အဲဒါက ပြီးခဲ့တဲ့ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှားကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ဒီဘရိုင်းနား အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျသလိုဖြစ်နေတာကလည်း မန်စီးတီးအတွက်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားက ကွင်းလယ်မှာတိုးအားရုန်းအားကောင်းပေမယ့် မန်စီးတီးကွင်းလယ်မှာ Intelligent Passing တွေလုပ်နိုင်တာက ဒီဘရိုင်းနားတစ်ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Crossing ၊ ကွန်ပြူတာနဲ့တွက်ချက်ထားသလို တိကျသေချာတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကနေ မန်စီးတီးအသင်းဂိုးရခဲ့တာက အကြိမ်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ အခု ဒီဘရိုင်းနား ပုံမှန်ခြေစွမ်းအောက်ရောက်နေချိန်မှာ ကွင်းလယ်က လုပ်အားနှုန်းကောင်းနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် ပဲ့ထိန်းမရှိဘဲ မောင်းနေရတဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်းလိုဖြစ်နေပြီး ကွင်းလယ်က ပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်နေပေမယ့် Impact ဖြစ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးမရှိတော့သလိုဖြစ်နေတယ်။
ဒီရာသီမှာ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်ရအောင်၊ ဒေါသထွက်အောင် ရသမျိုးစုံပေးနေတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြဆိုးလ်ရှားအတွက် အခုပွဲက သူ့အနာဂတ်ကို အဖြေထုတ်ပေးမယ့်ပွဲတွေထဲက တစ်ပွဲလို့သတ်မှတ်ရမှာပါပဲ။ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အားနည်းချက်က ဘာလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေလည်းသိနေပြီဖြစ်လို့ အထွေအထူး မဝေဖန်တော့ပါဘူး။
အရင်က (၄-၂-၃-၁)ကစားကွက်ကို ဘာမှ Strategy မပါဘဲ ဒီအတိုင်း ခင်းကျင်းပြီး ကစားနေတာကနေ အခုနောက်ပိုင်း (၃-၅-၂)၊ (၃-၄-၃)တွေ ပြောင်းကစားပေမယ့်လည်း ဆိုးလ်ရှားရဲ့ နည်းဗျူဟာအားနည်းချက်ကြောင့် ယူနိုက်တက်ကစားဟန်က တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အပြင် ပိုဆိုးတာက တိုက်စစ်ကစားသမားတွေပါ နေရာပျောက်ကုန်တော့တာပါပဲ။ စပါးနဲ့ပွဲမှာ (၃-၅-၂)ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုပြီး (၃-၀)ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် စပါးအသင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်း၊ ခြေစွမ်းပိုင်းက ယူနိုက်တက်ထက် ပိုဆိုးနေတာမေ့မထားသင့်ပါဘူး။
အခု ကွန်တီကိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသာ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ယူနိုက်တက်နည်းပြဘဝက အဲဒီပွဲအပြီးမှာပဲ အဆုံးသတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ အခု မန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာသာ (၃-၅-၂)နဲ့ဆက်ကစားရင် မန်စီးတီးဘက်က ပြိုင်ဘက်ဧရိယာထဲက Space တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတဲ့ ဂရီးလစ်ရှ်၊ ဖိုဒန်၊ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗား၊ ဂျေးဆုတို့အတွက် အကြိုက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲတုန်းက မန်စီးတီးကစားသမားတွေကို ကိုယ့်ကွင်းဘက်ခြမ်းမှာ လုံးဝ Space မပေးဘဲ Tight Defensive Play နဲ့ကစားခဲ့တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အခု ယူနိုက်တက်ရဲ့ Double Pivot ဖြစ်တဲ့ ဖရက်ဒ်၊ တွမ်မီနေးတို့ ရုန်းကန်နေရချိန်၊ ပေ့ါဘာက စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပြသနေချိန်မှာ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်က ခံစစ်ကို Cover လုပ်ပေးဖို့မလွယ်သလို၊ တိုက်စစ်ကို ပံ့ပိုးနိုင်စွမ်းက အရင်ကတည်းကမကောင်းတာကြောင့် ဘာမှမျှော်လင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
(၃-၅-၂)ကစားပုံအရ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူနဲ့တွဲဖက်ကစားရမယ့်သူ(စပါးနဲ့ပွဲမှာ ကာဗာနီ)ရှိလာလို့ အရင်လိုတစ်ယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတာမျိုးမရှိတော့ဘဲ၊ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကလည်း သူ့တစ်ယောက်တည်းကို အာရုံစိုက်လို့မရတော့တဲ့အတွက် (၁၈)ကိုက်ဧရိယာအတွင်း ပိုလှုပ်ရှားလို့ရလာတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြင်တာကတော့ ဗာရန်းလည်း ဒဏ်ရာရနေတာကြောင့် ဆိုးလ်ရှား အရင်အတိုင်း(၄-၂-၃-၁)ပဲပြန်ကစားဖို့များပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ခံစစ်မှာ အတ္တလန်တာနဲ့ပွဲတုန်းကခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဘာယီကို ပြန်သုံးသင့်တယ်လို့မြင်မိတယ်။
ပရိသတ်တွေအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေပေးစွမ်းမယ့် မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲကတော့ မနက်ဖြန်ကျရင် ကြည့်ရှုခံစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂွါဒီယိုလာကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မကြာခဏထိပ်ပုတ်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှားတစ်ယောက် ဒီပွဲမှာဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်လာမလဲ ..ဂွါဒီယိုလာကရော ယူနိုက်တက်အသင်းကို ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .